Warshad Taxane COVID-19 - Shiinaha Soosaarayaasha Taxanaha COVID-19, Alaab-qeybiyeyaal
Qalabka lagu ogaado cudurka 'Pseudorabies virus (gB) PCR'
E.coli O157: qalabka baarista H7 PCR
SAMPLER MICROBIAL AEROSOL
MA-6000 Nidaamka PCR Waqtiga dhabta ah
CHK-800 Soosaaraha aaladda nukliyeerka otomaatiga ah
CHK-16A Nidaamka Soo saarida Acid Nucleic otomaatig ah
UF-300 Real-waqtiga PCR System Flyer v1.0
COVID-19 / Hargab-A / Flu-B Qalabka wax lagu ogaado ee loo yaqaan 'RT-PCR' (Lyophilized)
New Coronavirus (COVID-19) wuxuu ku faafayaa aduunka oo dhan. Calaamadaha caafimaad ee COVID-19 iyo infekshinka infalawansadu isku mid yihiin.
Qalabka loo yaqaan 'COVID-19 mutation Multiplex RT-PCR' (Lyophilized)
Fayraska cusub ee 'Coronavirus' (COVID-19) waa Fayras Hal RNA ah oo RNA leh isbadal badana ku yimaada. Noocyada ugu weyn ee isbeddelada adduunka waa Ingiriiska B.1.1.7 iyo Koonfur Afrika 501Y.V2 noocyo.
Novel Coronavirus (2019-nCoV) Qalabka baaritaanka RT-PCR (Lyophilized)
Novel Coronavirus (COVID-19) wuxuu ka tirsan yahay β genus coronavirus waana fayraska 'RNA virus' oo hal dhexaadkiisu yahay 80-120nm. COVID-19 waa cudur daran oo faafa oo ku dhaca neef mareenka. Dadku guud ahaan waxay u nugul yihiin COVID-19.